လူမှုရေးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကိရိယာသို့ဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းများ (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2010, Volume ကို 25, ပြဿနာ 2, စစ 141-148
ဒေါင်းလုပ် PDF ဖိုင်ရယူရန် (169 KB) ကြည့်ရန်အပိုဒ်
Path ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေး exogenous ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ variable တွေကို (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, အကြမ်းဖက်မှုမှထိတွေ့မှု, ညစ်ညမ်း-တစ်ခုချင်းစီကိုကြိုတင်အသက်အရွယ် 13 မှဖြစ်ပေါ်ဖို့ထိတွေ့မှု) နှင့်လေးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Construction ( "စိတ်နှင့်ရန်သဘောထား", "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု၏အလှူငွေအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် "," pedophilia "," ရန်လိုသောပုလ်လက်ပေါ်တွင် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူ") ၏သမိုင်းနှင့်အတူ 256 ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးတစ်နမူနာများတွင်အထီးကလေးကသားကောင်များ၏ Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ငယ်ပြစ်မှုနှင့်နံပါတ်၏ခန့်မှန်းရန် "။ "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု" တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှစ်ဦးစလုံးရလဒ်များအပေါ် exogenous variable တွေကိုများ၏သက်ရောက်မှုများပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်အဓမ္မမှုမှထိတွေ့မှု "စိတ်နှင့်ရန်သဘောထားများ," Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ငယ်ပြစ်မှုများ၏ခန့်မှန်းဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ "ရန်လိုသောပုလ်" နှင့် "pedophila" မှတဆင့်သွယ်ဝိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်အထီးများကအလွဲသုံးစားမှုများနှင့်, အထီးကလေးသည်ခံရသူအရေအတွက်၏ခန့်မှန်းဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များ၏လက်တွေ့သက်ရောက်မှုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
မုဆိုး et al ။ (2010) ကြိုတင်အသက်အရွယ် 13 လေးယောက်အနုတ်လက္ခဏာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Construction မှညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုအပြုအမူတစ်ခုသမိုင်းနှင့်အတူ 256 ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးစစ်တမ်းကောက်ယူ; စာရေးသူလိင်နှင့်ကရာ၏ဘုန်းတော်ထင်ရှား၏ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်မြင်ကွင်းဖွယ်ရှိရလဒ်, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် antisocial အပြုအမူစောစောထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ (Hunter et al ။ , 2010) ။
လမ်းကြောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများတစ်သမိုင်းနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးထံမှကောက်ယူအချက်အလက်ပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (N ကို = 256) ကိုသုံးပြီး, Hunter et al ။ (2010) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေ့ရှိကလေးဘဝထိတွေ့မှု (စ။ 146) "ကရာ၏လူ့လိင်နှင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှား၏ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်အမြင်များ၏ဖွယ်ရှိပုံဖော်တင်ဆက်, ရန်နှင့်စိတ်သဘောထားများဖို့" အထောက်အကူပြုပေမည်။ ထို့အပြင်ဤစာရေးဆရာများဖြစ်သောကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်အမြဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူ "စစ်မှန်သောဘဝအတွေ့အကြုံများညှိဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ ။ .. သူတို့ (စ။ 147) "လူ့လိင်၏ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနိုင်ငံတကာအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးအညီပြုမူလိမ့်မည်။
keywords - လမ်းကြောင်း လူမှု deviance လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance မြီးကောင်ပေါက်
etiological antecedents နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအတွက်လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ရှင်းပြကူညီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များပေါ်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးရဲ့ကြိုတင်သုတေသနပြုပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု။ အစောပိုင်းသုတေသနပြုချက် (Hunter et al ၌တည်၏။ 2004 ), အစုံစမ်းစစ်ဆေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ငယ်ပြစ်မှုအတွက်စေ့စပ်ခဲ့တဲ့ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးသုံးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်စူးစမ်း: ။ "ရန်လိုသောပုလ်", "အတ်တဆ-ရန်ပုလ်," နှင့် "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု" ရန်လိုမုန်းတီးမှုပုလ်အတွက်သော့ချက်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါသည် Malamuth ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်၏ "မြစ်ဆုံ" မော်ဒယ်နှင့်အမျိုးသမီး၏အနုတ်လက္ခဏာသညာနှင့်ဆက်နွယ်ကြီးစိုးစိတ်ရင်းနှင့်လူ့ငြင်းပယ်ခံရအတွေ့အကြုံများထင်ဟပ် (Malamuth 1996 ; Malamuth et al ။ 1993 ) ။ မြစ်ဆုံ၏မော်ဒယ်မှာတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုလ်များ၏ညှိနှိုင်းအမျိုးသမီး (Malamuth et al ဆီသို့လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ "ကရာ-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်" (စိတျပိုငျးဆိုငျရာရငျးနှီးသို့မဟုတ်ကတိကဝတ်မရှိဘဲပေါ့ပေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး preference ကို) ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။ 1995 ) ။ အဆိုပါမြစ်ဆုံမော်ဒယ်ဥပမာ Abbey et al (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအမျိုးမျိုးအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ 2006 ; ခန်းမ et al ။ 2005 ; Jacques-Tiura et al ။ 2007 ), အဖြစ်တခြားနိုင်ငံတွေ (ဥပမာ, Lim ကနှင့် Howard အမျိုးမျိုးအတွက် 1998 ; မာတင် et al ။ 2005 ).
အတ်တဆ-ရန်ပုလ်တစ်ဦးကျပုံစံပုလ်လိင်အခန်းကဏ္ဍတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်မှထုတ်ပြန်သောသည်အခြားယောက်ျားနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲများတွင်ကြီးစိုးရှာသည့်သဘောထားကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒီဆောက်လုပ်ရေးတစ်ဦးကအဓိကညွှန်းကိန်းလူငယ် (ရိုဝီက et al အတွက်သက်ငယ်ပြစ်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းတွေ့ရှိထားသည်။ 1997 ) ။ အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုအချက်ကိုထိခိုက်ဒုက္ခဆင်းရဲ (ဆိုလိုသည်မှာ, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု) နှင့်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးနှင့်အတူရိပ်မိအခက်အခဲထင်ဟပ်။ သူတို့ရဲ့ကြိုတင်သုတေသနပြုခုနှစ်, စာရေးဆရာများရန်လိုသောပုလ်အပြုသဘောအတ်တဆ-ရန်ပုလ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုကလွှမ်းမိုးနှင့်အဆုံးစွန်သောနှစ်ခုအချက်များနှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောမဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်သက်ငယ်ပြစ်မှု (Hunter et al နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2004 ) ။ "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု" ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆန့်ကျင်အဖြစ်တစ်ဦး prepubescent ကလေးကဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလိင်ကြမ်းတမ်းအပြုအမူအတွက်စေ့စပ်ခဲ့တဲ့ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး၏သစ်တစ်ခုနှင့်ပိုမိုကြီးမားနမူနာများတွင်လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance သို့လမ်းကြောင်းစူးစမ်းနှင့်စူးစမ်း etiological antecedents နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Construction ၏နံပါတ်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုကြောင့်ကုသလိင်ကြမ်းတမ်းလူငယ်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းအတွက်၎င်း၏တိုးပွားလာပျံ့နှံ့၏လက်တွေ့လေ့လာမှဆက်ပြောသည်နှင့်သုတေသနထွန်းသစ်စကကျူးကျော်ပိုမိုအဆင့်ဆင့် (Alexis et al ဆီသို့သူတို့ကိုကျု့ံစေခြင်းငှါအကြံပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဲ့သည်။ 2009 ) ။ အဆိုပါလေ့လာခဲ့ "အတ်တဆ-ရန်ပုလ်" ဆောက်လုပ်ရေးနီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည့် psychopathy စရိုက်များပတ်ဝိုင်းမှကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ Psychopathy Kingston et al (အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများတွင်နှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကြံ့ခိုင်ခန့်မှန်းဖြစ်တွေ့ရှိထားသည်။ 2008 ; Beggs နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2008 ), နှင့်ဆေးခန်းကုသဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအထီးလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ဒီဂရီအမျိုးမျိုးအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လေ့လာသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Re-ဖောက်ပြန်တဲ့၏အခြားအားကောင်းတဲ့ခန့်မှန်း (Hanson နှင့် Morton-Bourgon များအတွက်အကောင့်မှသကဲ့သို့တစ်ဦးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance (ဆိုလိုသည်မှာ pedophilia) အချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့သည် 2005 ), နှင့်လူကြိုက်များလူငယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ-တိကျတဲ့အန္တရာယ်အကဲဖြတ်တူရိယာ (ဥပမာ, J-SOAP-II ကို) အတွက်၎င်း၏ပါဝင်မှုနှင့်အညီ။
ယခင်လေ့လာမှု၌ရှိသကဲ့သို့, ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးရဲ့မော်ဒယ်သီအိုရီသတ်မှတ်ထားသောခဲ့ပြီးသောယူဆချက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အတော်ကြာအဆက်ဆက်လှိုင်းတံပိုးသို့ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးလှိုင်းထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းစေရန်ကလေးဘဝထိတွေ့မှုအဖြစ် exogenous သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နောက်ခံ variable တွေကို, ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဒုတိယလှိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ တတိယလှိုင်းထိုကဲ့သို့သော "စိတ်နှင့်ရန်သဘောထား" (ပုတိုးချဲ့အတ်တဆ-ရန် Construction) အဖြစ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးတစ်ဦးချင်းခြားနားချက်အချက်များနှင့်သည် "ရန်လိုပုလ်။ " စတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးလှိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့ကိုယ်စားပြုရလဒ်ကို variable တွေကိုပါဝင်ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူများ၏အာရုံစိုက်အထီးခံရသူအရေအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်အထီးအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား (ဆိုလိုသည်မှာ, တူညီတဲ့-ကျား pedophilia) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ recidivism ၏အတော်လေးမြင့်မားတဲ့နှုန်းထား (Hanson နှင့် Morton-Bourgon နှင့်ဆက်စပ်သည်ကို ထောက်. ဤသည်တိကျတဲ့ရလဒ်ရွေးချယ်ခဲ့သည် 2005 ), နှင့်အထီးသားကောင်များနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ phallometrically တိုင်းတာ deviant လိင်စိတ်နိုးထ (Hunter et al ၏အဆင့်မြင့်ရှိသည်ဖို့တွေ့ပါပြီ။ 1994 ) ။ ထို့ကြောင့်အထီးသားကောင်များရှိခြင်းလူကြီးသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူ၏အဆက်များအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ရှုမြင်သည်။
ဗာဂျီးနီးယား, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား, မစ်ဆူရီနှင့်ကော်လိုရာဒို: လူငယ်ငါးဦးပြည်နယ်များအတွင်းရှိတရားရုံး-ဆက်နွယ်နှင့်ပြင်ဆင်ချက်-based အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်လူငယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်လူနေအိမ်ကုသမှုအစီအစဉ်များကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ "လက်ပေါ်တွင်" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူတစ်ဦးသမိုင်းနှင့်အတူ 13 နှင့် 18 ၏အသက်အရွယ်အကြားအားလုံးအထီးလူငယ်လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လူငယ်များနှင့်မိဘအသိပေးသဘောတူညီခကျြနှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်ခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ချဉ်းကပ်လူငယ်၏လေးပုံသုံးပုံနှင့်မိဘပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဝါဒသည်ထိုကဲ့သို့သောငွေပေးချေမှုတားမြစ်ခဲ့ပါဘူးဘယ်မှာပါဝင်များအတွက် $ 25.00 ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ လူငယ်ဟာအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်စာတတ်မြောက်ရေးစမ်းသပ်ခြင်းကို အသုံးပြု. ပဉ္စမတန်းစာဖတ်ခြင်းအဆင့်နိမ့်ဆုံးအဘို့အပြခံခဲ့ရသည်။ လူငယ်ဟာသူတို့ရဲ့ပါဝင်မှု၏ထိုအချိန်ကကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အမျိုးမျိုးသောအဆင့်မှာရှိကြ၏။
စိတ် ၀ င်စားသောလူငယ် ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်သတ်မှတ်ထားသောစာဖတ်ခြင်းစံနှုန်းနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖယ်ရှားပြီးနောက်တွင်လူငယ် ၂၈၅ ဦး အားအကဲဖြတ်အချက်အလက်များကောက်ယူခဲ့သည်။ ကိုးကားထားသောအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုချိုးဖောက်သည့်စံနှုန်းများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်လူငယ် ၂၅၆ ယောက်ကိုနမူနာယူခဲ့သည်။ ပါ ၀ င်သောလူငယ်များသည်အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အထိရှိပြီး၊ စုစုပေါင်းပျမ်းမျှအသက် ၁၆.၂ နှစ်ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်, စုစုပေါင်းနမူနာ၏ 285% ကော့ကေးဆပ်, 7% အာဖရိကန်အမေရိကန်, 256% ဟစ်စပန်းနစ်နှင့် 13% "အခြား" ။
လေ့ကျင့်သင်ကြားသုတေသနလက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုသမိုင်းတွင်ဒေတာ coded ။ စစ်တမ်းဒေတာအကြီးတန်းသုတေသနလက်ထောက်တစ်စိတ်ကျန်းမာရေးကုထုံးနှင့်ဗာဂျီးနီးယား-လက်မှတ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကုသမှုပေးသူ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကောက်ယူခဲ့သည်။ လူငယ်တစ်ဦးချင်းကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာဆိုးသွမ်းစကေး (SRD) (Elliott သည်နှင့် Huizinga နှင့်အတူတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည် 1983 ) လွန်ခဲ့သော (၁၂) လအတွင်းရန်လိုမှုများနှင့်ဆိုးသွမ်းသောအပြုအမူများတွင်သူတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် (နေရာမကျမီ ၁၂ လအလိုတွင်နေထိုင်သူလူငယ်များဖြစ်လျှင်) ။ လူငယ်ကိုလည်းအကျိုးစီးပွား၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆောက်လုပ်မှုများတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းအကဲဖြတ်တူရိယာ၏တစ် ဦး ဘက်ထရီအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
Self-အစီရင်ခံစာအချက်အလက်များ၏တရားဝင်မှုသေချာကူညီရန်နှင့်လူမှုရေးလိုလားအစီရင်ခံစာဘက်လိုက်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ attenuate ရန်, လူငယ်အားလုံးစုဆောင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, attitudinal, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆိုးသွမ်းအပြုအမူ data တွေကိုလျှို့ဝှက်တို့အလိုမရှိကြောင်းအသိပေးသဘောတူညီခကျြလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်စိတ်ချပါခဲ့ကြသည် ကုသ, အစီအစဉ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, ဒါမှမဟုတ်မိဘတွေနဲ့အတူမျှဝေလိမ့်မည်။ ယင်းအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၏ထောက်ခံမှုခုနှစ်တွင်မရှိအမည်များသို့မဟုတ်အခြားဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်သုတေသနပုံစံများအပေါ်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ အဲဒီအစားအသီးအသီးပါဝင်သူသုတေသနပုံစံပေါ်တွင်နေရာချခံခဲ့ရတဲ့အရေအတွက်ကတာဝန်ကျတယ်။ သူ့ရဲ့သုတေသနအရေအတွက်ကိုနှင့်အတူလူငယ်ရဲ့နာမညျကိုကိုက်ညီတစ်ဦးကမာစတာစာရင်းကိုသာအကြီးတန်းသုတေသနလက်ထောက်ဖို့လက်လှမ်းအဆိုပါသုတေသန site ကိုမှာသော့ခတ်နှင့်အဓိကထားလေ၏။
Exogenous Variables ကို
A လူမှုသမိုင်းမေးခွန်းလွှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖခင်တစ်ဦးတို့ကအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ပထွေး၏အတိုင်းအတာအသက်အရွယ် 1 မှကြိုတင်) ကြိုတင်အသက်အရွယ် 13,2မှအထီး-လုပ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုမှထိတွေ့မှု၏အတိုင်းအတာ) 13) ကြိုတင်အသက်အရွယ် 3, 13 မှညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏အတိုင်းအတာ: လေး exogenous variable တွေကို define လုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည် ကြိုတင်အသက်အရွယ်4မှအထီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့် 13) အတိုင်းအတာ။
အမျိုးသမီးများနေ့ခါနီးရန်လိုမုန်းတီးမှု ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ထားသည်ဟုအဖြစ် (Check (ဥပမာ, "ဒါဟာမိန်းကလေးတွေယုံကြည်စိတ်ချဖို့မပိုလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်") အမျိုးသမီးတစ်ဦးကအနုတ်ကျပုံစံအမြင်ရောင်ပြန်ဟပ်နေတဲ့ 21-ကို item တူရိယာဖြစ်ပါတယ် 1985 ).
ရန်ဘက်ပြုသောသူတို့ကိုလိင်ယုံကြည်ချက် အရာအထီး-အမျိုးသမီးဆက်ဆံရေး ( "တစ်ဦးချိန်းတွေ့ကြားဆက်ဆံရေးမှာတော့အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်လူအားသာချက်ယူအကြီးအကျယ်ထွက်က" ဥပမာ) ရန်ဖြစ်ဖို့ရိပ်မိနေကြဖို့ဒီဂရီအကဲဖြတ်တစ်ဦး 9-ကို item စကေး Burt (ဖြစ်ပါတယ် 1980 ).
ကိုယ်ကျင့်တရားဆဲပါစကေး အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အမျိုးသမီးမှာညွှန်ကြားထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏လက်ခံ၏ 32-အမှတ် ratings ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် 7-ကို item တူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ Malamuth (ဥပမာ, "လူအခြို့သောအမြိုးသမီးမြားအပျေါသူ့ကိုယ်သူအတင်းရန်အဘို့အအချို့သောတကယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂရုမစိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအဆင်ပြေဖြစ်ပါတယ်။ ") လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သုတေသနအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာစကေးဥပမာ Bandura et al (ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆဲပါအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တဲ့သူက Albert Bandura နှင့်အပေါင်းအသင်း၏လုပျငနျးအပျေါအခွခေံခဲ့သည်။ 1996 ) ။ Malamuth အထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့သူကအဆင်ပြေအောင်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Functions များညွှန်းကိန်း (Dominic စကေး) နယ်လ်ဆင် (ကြီးစိုးစိတ်ရင်းတိုင်းတာကြောင်း 8 ပစ္စည်းများပါဝင်သည် 1979 ).
Revised ဆွဲဆောင်မှုစကေး (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်) မုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုအကဲဖြတ်နှစ်ဆယ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ဤပစ္စည်းများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးအတွက်အကျိုးစီးပွား (Malamuth တိုင်းတာခြင်းပစ္စည်းများတစ်စီးရီးအတွက် embedded နေကြတယ် 1989 ).
မိတ်လိုက်ကြိုးပမ်းမှုစကေး intrasexual အမျိုးသမီး၏လိုက်စားအတွက်အထီးအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များအတွက်ဦးစားပေး (ရိုဝီက et al ကိုတိုင်းတာတဲ့ 10-ကို item စကေးဖြစ်ပါသည်။ 1997 ).
အနုတ်လက္ခဏာ / အပြုသဘောဆောင်သောပုလ် / ဣတ္- အနုတ်လက္ခဏာပုလ်ကိုတိုင်းတာသည့်ပစ္စည်းကိုးခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (ဥပမာ“ ကျွန်ုပ်သည်သူဌေးတစ် ဦး ဖြစ်သည်”) (Spence et al ။ 1979 ).
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုင်ရာသုတေသန Form ကို-Form ကိုအီး ( "Impulse စကေး") Malamuth et al အသုံးပြုသော 15 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ( 1995 )) (ဥပမာ "ကျွန်မမကြာခဏငါ့ဦးခေါင်းမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာကဆိုသည်။ " Impulse အကဲဖြတ်ရန် (Jackson က 1987 ).
Levenson ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာ Psychopathy စကေး စိတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ (Levenson et al တိုင်းတာခြင်းတစ် 26-ကို item တူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ 1995 ).
လူငယ်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာ (Breaking အပြုအမူအုပ်ချုပ်) (ဥပမာ, "ငါသည်မုသာသို့မဟုတ်ခိုး။ ") ဆိုးသွမ်းခြင်းနှင့် antisocial အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက် propensity အကဲဖြတ် 15 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
လူငယ်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာ (လူမှုရေးပြဿနာများ, နှိမ့် / စိုးရိမ်ပူပန်နှင့် / နှိမ့်ရုတ်သိမ်း) - ထိုအကြေးခွံအသီးသီး, ဆင်းရဲသော Self-လေးစားမှုနှင့်အထီးကျန်တိုင်းတာကျက်နှင့်သက်တူရွယ်တူငြင်းပယ်ခံရနှင့်လူမှုရေးအထီးကျန် (Achenbach နှင့် Dumenci 2001 ).
Revised ဆွဲဆောင်မှုစကေး (Pedophilic စိတ်ဝင်စားမှုများ) ကလေးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား (Malamuth အကဲဖြတ်ရန်လေးပစ္စည်းများပါဝင်သည် 1989 ).
ရလဒ်ကို Variables ကို
အမျိုးသားခံရသူအရေအတွက် Hunter et al (ယခင်လူငယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသုတေသနအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးအသုံးပြုသောကာအမှုတွဲပြန်လည်သုံးသပ်တူရိယာထံမှ coded ခဲ့သည်။ 2004 ).
non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးသွမ်း ယင်းမှပါဝင်သူတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည် ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာဆိုးသွမ်းစကေး (SRD) (အမျိုးသားလူငယ်စစ်တမ်း) (Elliott သည်နှင့် Huizinga 1983 ).
အားလုံး univariate နှင့် multivariate ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SAS 9.1 သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအရွယ်အစား၏န့်အသတ်မှတစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုတည်း multivariate မော်ဒယ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီပစ္စည်းအားလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့မဖြစ်နိုင်ပါခဲ့သောကြောင့်, တစ်ဦး hierarchical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမဟာဗျူဟာအလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ ပထမဦးစွာပစ္စည်းများသီအိုရီအနိမ့်ယူမှုကိုအချက်အကြေးခွံတွေးဆဖို့တာဝန်ကျတယ်။ ထို့နောက်ယူနစ်မာန်တင်းဘုံဆခွဲကိန်းရမှတ် (Gorsuch 1983 ) Figueredo et al (တစ်ဦးချင်းစီ subscale ပေါ်မှာရှိသမျှ Non-ပျောက်ဆုံးပစ္စည်းများအတွက်စံကို item ရမှတ်၏နည်းလမ်းသုံးပြီး, SAS proc Standard များနှင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုအောက်ပိုင်းယူမှုကိုအချက်အကြေးခွံများနှင့်အများအပြား Higher-အလို့ငှာအချက်များအဘို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ 2000 ) ။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေအချက်အလက်များ၏အများဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေမယ့်, သာ 256 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကျန်ရှိပျောက်ဆုံးဒေတာဖို့ SEM များအတွက်အသုံးဝင်သောခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် Cronbach ရဲ့ alpha နှင့် SAS proc CORR အတွက်အနိမ့်ယူမှုကိုအချက်အကြေးခွံများ covariance မက်တရစ်နှစ်ဦးစလုံးခဲ့ကြသည်တွက်ချက်။ ဤအနိမ့်ယူမှုကိုအချက်အကြေးခွံများတစ်ဦးချင်းစီ၏ပြည်တွင်းရေးတသမတ်တည်းစားပွဲတင်အတွက်တင်ပြကြသည် 1။ ဤအနိမ့်ယူမှုကိုအကြေးခွံ၏အချို့ပစ္စည်းများကိုတစ်ဦးအနိမ့်အရေအတွက်ကြောင့်အတန်ငယ်နိမ့် Alpha ခဲ့ပေမယ့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကို item-စကေးဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်ပိုင်းယူမှုကိုအချက်အကြေးခွံပေါ်ယူနစ်မာန်တင်း Higher-အလို့ငှာအချက်များစားပွဲတင်အတွက်တင်ပြကြသည်၏ဝန် (စကေး-Factor ဆက်စပ်မှု) 2.
အကြေးခွံများ internal ကိုက်ညီမှု
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Functions များ Inventory (Dominic)
Revised ဆွဲဆောင်မှုစကေး (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်)
Revised ဆွဲဆောင်မှုစကေး (Pedophilic အကျိုးစီးပွား)
Levenson ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာ Psychopathy စကေး
စိုးရိမ်စိတ် / စီးပွားပျက်ကပ် (လူငယ်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာ)
ဆုတ်ခွာ / စီးပွားပျက်ကပ် (လူငယ်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာ)
Revised ဆွဲဆောင်မှုစကေး (Pedophilic စိတ်ဝင်စားမှုများ)
လူအားလုံးတို့သည်ယူနစ်မာန်တင်းအချက်အကြေးခွံတစ်ခုတည်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်အတွင်း multivariate ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကျမှုကိုထငျရှား variable တွေကိုအဖြစ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ် SAS proc CALIS အားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ စံချိန်စံညွှန်းမီ subscales သီအိုရီအမြင့်အမိန့် Construction ဖို့တာဝန်နှင့် convergence တရားဝင်မှုအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ဤအဆောက်လုပ်ရေးအကြားအခြေခံအဆောက်အဦးညီမျှခြင်းမော်ဒယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုအကြားအခြေခံအဆောက်အဦးဆက်ဆံရေးဟာ multivariate ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအဆောက်အဦးညီမျှခြင်းမော်ဒယ်မထိုက်မတန်၏မျိုးစုံညွှန်းကိန်းအားဖွငျ့အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးစာရင်းအင်းများကအဆိုပါမော်ဒယ်မထိုက်မတန် (χ2(23) = 29.018, p = .1797) နှင့်လက်တွေ့ (IFC က = .984, NNFI = .969, NFI = .932, RMSEA မထိုက်မတန်၏ = .033) ညွှန်းကိန်း။ ဂဏန်း 1 စံချိန်စံညွှန်းမီဆုတ်ယုတ်ကိန်းနှင့်အတူပြည့်စုံလမ်းကြောင်းကိုမော်ဒယ်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြသအားလုံးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမ်းကြောင်း (ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာရှိပါတယ်p <.05) ။
အဆိုပါဆက်စပ်မှုလွတ်လပ်စွာခန့်မှန်းခဲ့ပြီးသောအကြားလေး exogenous variable တွေကို, ရှိခဲ့သည်: အကြမ်းဖက်မှု, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှထိတွေ့မှု, အထီးများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်မှထိတွေ့မှု, နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု။ ဤရွေ့ကားဆက်စပ်မှုအမြင်အာရုံစုပြုံပြွတ်သိပ်ရှောင်ရှားရန်လမ်းကြောင်းပုံမှာပြထားတဲ့ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်စားပွဲတင်အတွက်တင်ပြကြသည် 3.
exogenous variable တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှု
1. အကြမ်းဖက်မှုမှ exposure
4. ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှ exposure
အဆိုပါခန့်မှန်းညီမျှခြင်းအလှည့်အတွက် endogenous variable ကိုအသီးအသီးအဘို့အဖော်ပြထားပါလိမ့်မည်:
1.စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု သိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည် ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှ exposure (β = .16), ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု (β = .13), နှင့် အထီးများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင် (β = .17) ။
2.စိတ်နှင့်အရန်သဘောထားများကို သိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုမှ exposure (β = .31), ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှ Exposure (β = .16), နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု (β = .26) ။
3.စုစုပေါင်းက Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးသွမ်း သိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုမှ exposure (β = .28) စိတ်နှင့်အရန်သဘောထားနှင့် (β = .31); ကသိသိသာသာလျော့နည်းသွားခဲ့သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု (β = -.18) ။
4.ရန်လိုသောပုလ် သိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည် စိတ်နှင့်အရန်သဘောထားများကို (β = .50), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု (β = .18), နှင့် အထီးများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင် (β = .12) ။
5.Pedophilia သိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည် ရန်လိုသောပုလ် (β = .19) နှင့် အထီးများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင် (β = .22) ။
6. အမျိုးသားခံရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက် သိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည် Pedophilia (β = .13) နှင့် အထီးများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင် (β = .20) ။
လေးပါး exogenous နောက်ခံ variable တွေကိုဖုံးလွှမ်းနေတာကိုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကကမကထပြုခဲ့နှစ်ဦးစလုံး, ဒီမော်ဒယ်နှစ်ခုအဓိကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းရှိပေါ်လာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု။ ဤအလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာမှတဆင့်ဦးဆောင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု နှင့်လမ်းဖြင့် စိတ်နှင့်အရန်သဘောထားများကို သို့ စုစုပေါင်းက Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးသွမ်း။ အခြားအဓိကလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ဦးဆောင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု နှင့်လမ်းဖြင့် ရန်လိုသောပုလ် သို့ Pedophilia နှင့် အမျိုးသားခံရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်။ အဲဒီနှစျခုအဆုံးစွန်ရလဒ် variable တွေကိုများအတွက်မျိုးစုံနှစ်ထပ်ဆက်စပ်မှုရှိကြ၏ R2= .22 များအတွက် စုစုပေါင်းက Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးသွမ်း နှင့် R2= .07 များအတွက် အမျိုးသားခံရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်။ ဒီလမ်းကြောင်းမော်ဒယ်ထို့ကြောင့်ရှင်းလင်းစွာအတွက်ကှဲလှဲများအတွက်စာရင်းကိုင်များ၏ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အလုပ်ခဲ့တယ် စုစုပေါင်းက Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးသွမ်း အတွက်ကှဲလှဲဘို့ထက် အမျိုးသားခံရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုမော်ဒယ်နှစ်ခုကအဓိကအာမခံအန္တရာယ်အချက်များခန့်မှန်းတစ်ခုပင်ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်, စိတ်နှင့်အရန်သဘောထားများကို (R2= .25) နှင့် ရန်လိုသောပုလ် (R2= .39), မော်ဒယ်ခန့်မှန်းအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာမလုပ်ခဲ့ပေမယ့် Pedophilia (R2= .11) ။ အပြင်၏ဘုံနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြန်ဖြေသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုအဲဒီနှစ်ခုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများအကြားတစ်ခုတည်းသောအခြားအဓိက crossover အမှတ် (အလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုခဲ့β = .50) ၏ စိတ်နှင့်အရန်သဘောထားများကို on ရန်လိုသောပုလ်။ ကျနော်တို့မူလကကြောင်းတွေးဆခဲ့ပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု (ထိုမော်ဒယ်အတွက်အဓိကအာမခံ, ကှဲလှဲသာအတော်လေးသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏပါလိမ့်မယ်R2= .10) ၌တည်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု နောက်ထပ်မြစ်အောက်ပိုင်းပိုကြီးတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုအားထုတ်သည့် exogenous variable တွေကိုအများအပြားနှင့်တကွ, exogenous variable တွေကိုအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု ကိုယ်တိုင်ကသာဖြန်ဖြေအန္တရာယ်အချက်များပေါ်တွင်အလယ်အလတ်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ စိတ်ပညာနှင့်ရန်လိုသောသဘောထားများ (β = .26) နှင့် ရန်လိုသောပုလ် (β = .18) ။
ဒီ cross-section လေ့လာမှုဖြစ်ပြီး, variable တွေကိုအကြားသတ်မှတ်ထားသောအမိန့်တစ်စုံတစ်ရာလေ့လာတွေ့ရှိယာယီပာအပေါ်အခြေခံပြီးသက်သက်သာသီအိုရီများနှင့်မဟုတျပါဘူး, ငါတို့လူငယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ပြဿနာအပြုအမူမှဦးဆောင်နှစ်ခုဖွယ်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ကအသိအမှတ်ပြုရပါမည်ဖြစ်သော်လည်း ပထမဦးဆုံးအဓိကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းတစ်ဦးအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာစေခြင်းငှါ လူမှု Deviance လမ်းကြောင်း, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်နှင့်ရန်သဘောထားမှတဆင့်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ငယ်ပြစ်မှုမှဦးဆောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုကကမကထပြုခဲ့။ ဒုတိယအဓိကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းတစ်ဦးအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာစေခြင်းငှါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Deviance လမ်းကြောင်းလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရန်လိုသောပုလ်နှင့် pedophilic အကျိုးစီးပွားမှတဆင့်ဦးဆောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုကကမကထပြုခဲ့ခြင်း, နောက်ဆုံးတော့အထီးကလေးတွေဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်း။ အများဆုံးလူငယ်အပြုအမူနှစ်ခုလုံးပုံစံများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသောကြောင့်၏သင်တန်းအဲဒီနှစ်ခုလမ်းကြောင်း, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်လုံးဝလွတ်လပ်သောမဟုတ်ပါ။ သို့သျောလညျး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Deviance ယင်းအတွက်လျော့နည်းထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍအချို့ထူးခြားတဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ် လူမှု Deviance နောက်ဆုံးမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့၏ဘုံတှငျအခြို့သောသှေးကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်လမ်းကြောင်း။ ဤရွေ့ကားဒေတာ Malamuth ရဲ့ (ချမ်းသာစွာနေ fit 2003 ပိုပြီး "တိကျတဲ့" ဒီလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အဖြစ်ရလဒ်များအပေါ်ပိုပြီး "ယေဘုယျ" antisocial နှင့်ပြဿနာဝိသေသလက္ခဏာများ (ဆိုလိုသည်မှာ, စိတ်သဘောထားတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှု) ၏သက်ရောက်မှုလက္ခဏာများကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မထွက်ရ "hierarchical-ဖျန်ဖြေမြစ်ဆုံမော်ဒယ်" ၏) မကြာသေးမီဖော်ပြချက် (ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါအထူးသဖြင့်ရလဒ်မှပုလ်) ရန်လိုသော။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်များတွင်ဤသူအပေါင်းတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ပြဿနာများပိုမို distal အကြောင်းတရားများဖွံ့ဖြိုးဆဲသူငယ်၏တိုက်ရိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်နှင့်မသင့်လျော်အကြမ်းဖက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစောစောထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးအပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်၏အမျိုးမျိုးသောဆိုးရွားသောနှင့်ယူဆရ exogenous ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအမျိုးမျိုးသောအခြားရွေးချယ်စရာပေမယ့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သီးသန့်မပေးနည်းလမ်းတွေမှာသူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအားထုတ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုမှာကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုတံဆိပ်ကပ်သောဆောက်လုပ်ရေးအတွက် encapsulated အဖြစ်တိုက်ရိုက်အဆိုပါသိမြင်ဖို့ပျက်စီးခြင်း, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်သူငယ်၏လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ၏ပုံစံ, လူငယ်သက်သေအထောက်အထားများအနိမ့်လူမှုရေး Self-လေးစားမှုနှင့်စိတ်နှောင့်အယှက်ကိုညှဉ်းဆဲ။ ဤရွေ့ကား, ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကျန်းမာသက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေးထူထောင်အပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာတာဝန်များကို, သူတို့ရဲ့ဆည်းထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ဤအဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုအကြမ်းဖက်များနှင့်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုစောစောနှင့်မသင့်လျော်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု antisocial အပြုအမူတွေ၏တိုက်ရိုက်မော်ဒယ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျကွိုးစားအားထုနှင့်ယူဆရ antisocial အခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်များရန်, ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေစေခြင်းငှါအရာ, ရန်စခွေငျးငှါအခြားသောလမ်း, နှင့်ရန်ဘက်ပြုသော antisocial မဟာဗျူဟာများနှင့်ပုံမှန်ကျန်းမာ, mutualistic နှင့်သမဝါယမ prosocial မဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်၌တည်၏။ ဤသည်ဖျန်ဖြေရေးယန္တရားလူမှုရေးသင်ယူမှုသီအိုရီ (Bandura ၏အမြင်များနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် 1973 ).
ယန္တရားဖြန်ဖြေတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီ (Malamuth ၏အမြင်များနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် 1996 , 1998 ) ။ Figueredo နှင့် Jacobs ( 2009 ရှင်သန်မှုအတွက်ထက်မျိုးပွားအတွက်ပိုပြီးအရင်းအမြစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ) မျိုးပွါးအတွက်ထက်ရှင်သန်မှုအတွက်ပိုပြီးအရင်းအမြစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုနှေးကွေးဘဝသမိုင်းဗျူဟာ () mutualistic လူမှုရေးမဟာဗျူဟာများချမှတ်ရန်ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပြုနှင့်အစာရှောင်ဘဝသမိုင်းရှိသည်ဟုဗျူဟာ () ရန်ချမှတ်ရန်ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့များမှာ လူမှုရေးမဟာဗျူဟာများ။ ဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝပတ်ဝန်းကျင်ဤဆိုးရွားသောဝိသေသလက္ခဏာများလူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြှင့်တင်ရေးစေခြင်းငှါအခြားသောလမ်း (Brumbach et al တွေ့မြင်ပိုမြန်ဘဝသမိုင်းမဟာဗျူဟာများဆီသို့ဦးတည်အပြုအမူဖှံ့ဖွိုးတိုးတ biasing ဖွငျ့ဖွစျသညျ။ 2009 ; အဲလစ် et al ။ 2009 ) ။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အမူအကျင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ပိုမြန်ဘဝသမိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာများ, မတည်မငြိမ်ခန့်မှန်းရခက်များနှင့်မထိန်းချုပ်ဖြစ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်တိုးပွားလာကြရသည်။ တငျထားအကြမ်းဖက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပါအဝင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်စောစောထိတွေ့မှု, စုပေါင်းတစ်ဦး, ကြမ်းတမ်းအန္တရာယ်များနှင့် Hyper-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတွေကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏အန္တရာယ်များနှင့်အတူစရာတွေရှိပါတယ် extrinsic သို့မဟုတ်မထိန်းချုပ်ရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်း, လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ၏ဒြပ်စင်အပါအဝင်တစ်ပိုမြန်ဘဝသမိုင်းမဟာဗျူဟာ, ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးသတိလစ်တွေကိုပေး, ရေတိုရေရှည်ရပ်တည်ရေးနဲ့အစောပိုင်းမျိုးပွါးအဘို့အအရှိဆုံးသပ္ပါယ်မဟာဗျူဟာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၏သင်တန်း, ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအရပျကိုလုယူသောအတွက်အလုပ်မဖြစ်ကလေးဘဝ microenvironment ပြင်ပတွင်, ထိုကဲ့သို့သောမဟာဗျူဟာမှာအားလုံးသပ္ပါယ်မဖွစျစခွေငျးငှါများနှင့်ယဉ်ကျေးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကျယ်ပြန့်လူမှုစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အတူလေးနက်ပဋိပက္ခထဲသို့လူငယ်ယူဆောင်လာစေခြင်းငှါ (Bronfenbrenner တွေ့မြင် 1979 ).
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာအလားအလာန့်အသတ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ထိရောက်မှုရှိသည်ဖို့လေးပါးကိုအဓိက "သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ" နောက်ခံ variable တွေကိုအဘို့, သူတို့တစ်တွေအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဒီဂရီမှဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးအဖို့ "extrinsic" သို့မဟုတ် "exogenous" သူဖြစ်ရမည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးကယူဆရသည်ဤဆိုးရွားသောပတ်ဝန်းကျင်မှာသို့နေရာချခြင်းနှင့်အညီတုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် variable တွေကိုအပြည့်အဝ exogenous မဟုတ်ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အကြောင်း, ဗီဇသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသဘောထားအပါအဝင်, ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေး၏ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူဖြစ်သောသူတို့သည်ဤဆိုးရွားသောပတ်ဝန်းကျင်မှာ (ဥပမာအချို့လူငယ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများထွက်ရှာပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်) ကိုထိတွေ့ခဲ့သည်ကိုအတိုင်းအတာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြပေမည်။
ရလဒ်များလူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်များ၏လျှော့ချရေးနှင့်ပြီးသားမန်နီးဖက်စ်သည်ပြဿနာများနှင့်အတူလူငယ်၏လက်တွေ့လိပ်စာနှစ်ခုလုံးအတွက်ယေဘုယျလမ်းညွှန်ချက်ပေး။ အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများထိတွေ့မှုများနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာအတွေ့အကြုံများအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြပြီး deviant သဘောထားများနှင့်အပြုအမူမှလူငယ် predispose သောရန်တွေ့ခြင်းအဘို့အထောက်ခံမှုရှိပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှုမှ exposure antisocial သဘောထားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးရန်ပေါ်လာသည်နှင့်ဖြစ်ကောင်းမော်ဒယ်မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအထောက်အကူပြုရန်။ ညစ်ညမ်းစေရန်ကလေးဘဝထိတွေ့မှုလည်းကရာ၏လူ့လိင်နှင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှား၏ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်အမြင်များ၏ပုံဖော်တင်ဆက်မှတဆင့်ဖွယ်ရှိ, ရန်နှင့်စိတ်သဘောထားများအထောက်အကူပြုရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးကလေးဘဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုလူမှုရေး Self-လေးစားမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုသုခချမ်းသာများ၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲလူငယ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပျက်စီးစေခြင်း, လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ၏သူ၏ "ချ-stream" အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ယခင်သုတေသနမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအထီးများကကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်ကိုတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်အထီးကလေးတွေဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူခန့်မှန်းထားပါတယ်။ တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ဖွယ်မော်ဒယ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အဆိုပါသွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုမှခေါ်ဆောင်သွားရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
ဒါဟာထို့ကြောင့်ဤဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၏သီလအားဖြင့်လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance အဘို့အမြင့်မားအန္တရာယ်မှာနေသောလူငယ်များအတွက်အစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု programming ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သမ္မာသတိရှိသောယ့်ပုံပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အများပြည်သူဒေါ်လာများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနောက်ပိုင်းတွင်ထိုကဲ့သို့လူငယ်ဆက်ဆံပါနှင့် incarcerate မှရှိခြင်း၏အလွန်များပြားလှသောကုန်ကျစရိတ် offset ကိုကူညီလိမ့်မည်။ အဆိုပါကောက်ယူသုတေသနသူအကြောင်းမဲ့ထားပြီးဖြစ်သောဖို့အထူးအန္တရာယ်အချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး, ထိုကဲ့သို့သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပြဋ္ဌာန်းနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ညစ်ညမ်းစေရန်လေးလံသောကလေးဘဝထိတွေ့မှုနှင့်အတူလူငယ်ကျန်းမာပုလ်လေ့ကျင့်ရေးမှအကြိုးခံစားစေနိုင်သည်။ ကျားမတန်းတူရေး, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နှင့်သင့်လျော်သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစေတနာအပေါ် predicated ကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ရေးပုလ်၏ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ပုံရိပ်တွေ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်နှင့်ကျန်းမာလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုမော်ဒယ်များ၏သင်ကြားမှုများပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။ ပြောင်းပြန်လိင်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်ကလေးများ Self-လေးစားမှုနှင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများ၏အဆောက်အဦကနေအကျိုးခံစားရဖို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဆုံးစွန်သောအပြစ်တင်ခြင်းနှင့်တာဝန်များ၏အရည်အသွေးများ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း, လူမှုရေးနှင့်အမျက်ဒေါသစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ၏သင်ကြားမှုများပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။
ဒီနှင့်အခြားသုတေသနအဖြစ်နှိပ်စက်လူငယ်အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန် (ဘရောင်း et al များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ 2008 ), သတိထားအာရုံစူးစိုက်မှုလည်းစိတ်ဓါတ်များနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ maladaptive သိမြင်မှု၏လိပ်စာမှပေးအပ်ခြင်းခံရဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်မှတ်စု, နှိပ်စက်လူငယ်အတော်များများလည်းကျမှုကိုထငျရှား PTSD ၏။ ဒါဟာ "re-ကြုံနေရ" ရောဂါလက္ခဏာတွေ sexual abuse လူငယ်အတွက်တခါတရံတွင်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်ရုပ်ပုံများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှုများထပ်တလဲလဲပါဝင်သောပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာရဲ့လေ့လာရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဤလူငယ် (pent-up, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှု၏ဆိုလိုသည်မှာခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်ဥတု) ၏နံပါတ်၏နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသရုပ်ဆောင်ထွက်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်တည်းကကုသမှုမရှိဘူး left ကခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်အစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပရိုဂရမ်းမင်း၏အာရုံ PTSD အဘို့အနှိပ်စက်လူငယ်များ၏သတိထားစိစစ်ဖြစ်သင့်သည်။ အစောပိုင်းကုသမှုကိုထိခိုက်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ခံစားချက်မတည်ငြိမ်မှုသက်သာရာဒါပေမယ့်လည်းနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာများ externalizing များ၏အန္တရာယ် attenuate ကူညီစေခြင်းငှါမသာ။
အဆိုပါကောက်ယူသုတေသနကိုလည်းပြီးသားလူမှုရေးအရနှင့်လိင် deviant အပြုအမူအတွက်စေ့စပ်ကြသူလူငယ်၏ကုသမှုများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝညစ်ညမ်းထိတွေ့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူငယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ, ကုသမှုအစီအစဉ်များကိုထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းအတွက်အနုတ်လက္ခဏာမက်ဆေ့ခ်ျများပြင်ပေးရန်ကြိုးစားရပေမည်။ အရွယ်ရောက်သူအများစုနှင့်မတူဘဲအများဆုံး Juvenile လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူစစ်မှန်သောဘဝအတွေ့အကြုံများ counterbalancing ကြဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, သူတို့ကလူ့လိင်၏ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနိုင်ငံတကာအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးအညီပြုမူလိမ့်မည်။ ပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာတူညီတဲ့အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်အထက်အမျိုးသမီးမှမိမိတို့၏မအင်္ဂါထိတွေ့ကြသူလူငယ်တစ်ဦးအရေအတွက်ဆေးခန်းကဒီမမြင်စဖူး။ သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ထား, ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံပြီးအချို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၌, အမျိုးသမီးလိင်နှိုးဆွသူတို့နှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးအပျက်သဘောတုံ့ပြန်သည့်အခါအချို့သောကိစ္စများတွင်လူငယ်အမျိုးသမီးကိုမကြာခဏအသုံးချကစားဖြစ်ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာယောက်ျား၏ငြင်းပယ်ကြောင်းသက်သေအဖြစ်ဤအနက်။ ကုသမှုအတွက်ရည်ညွှန်းလူငယ်၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့, ထိုကဲ့သို့သောသဘောထားအမြင်မုဒိမ်းမှုပုံစံတစ်ခုပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
လက်ရှိသုတေသနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုနှစ်မျိုးလုံးရှိပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ကမတည်ငြိမ်မှု affective အထောက်အကူပြုပုံနှင့် pent-up, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုနှင့်အဆက်မပြတ်အထောက်အကူပြုပေမည်။ ထို့ကြောင့်လိင်ကြမ်းတမ်းလူငယ်များအတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ်များကိုလည်းဂရုတစိုက် PTSD အဘို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်မျက်မြင်လက်တွေ့လက်ခဏာကယ်ဆယ်ရေးစခန်း (ဥပမာ, "တာရှညျ Exposure") အကြောင်းကိုရောက်စေဖို့သရုပ်ပြခဲ့ကြကြောင်းတွဲဖက်ကုထုံးပူဇော်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီလူငယ်အတွက်နာတာရှည် PTSD ၏တက်ကြွသောကုသမှုကုသမှုလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ခံစားချက် / အမူအကျင့်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအလယ်တန်းအမြတ်ထုတ်လုပ်ကြောင်းပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာရဲ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်နှင့် deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားလျော့ကျလာ၏အလယ်တန်းအကျိုးကျေးဇူးရှိစေခြင်းငှါ။ ဤကိစ်စတှငျ deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးဆဲခံရဖို့ပေါ်လာတဲ့သူလူငယ်မရှိတော့သူတို့ရဲ့နာတာရှည် PTSD ၏အောင်မြင်သောကုသမှုအောက်ပါကြောင်းလမ်းကိုတင်ပြစေနိုင်သည်။
ရလဒ်ကိုသုတေသနရှင်းလင်းစွာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအထီးလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ပို. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကုသမှုအစီအစဉ်များကို (စောင့်ဆိုင်း et al ကနေဆင်းပြီးနောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတွေကိုကြောင်း Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကျူးလွန်ရန်ဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ 2005 ) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းရန်နှင့်စိတ်သဘောထားများပေါ်ပေါက်ရေးမှတစ်ဆင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အကြမ်းဖက်မှုမှ exposure ထိုကဲ့သို့သောသဘောထားတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ငယ်ပြစ်မှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောသဘောထားတွေ၏မွေးစားရန်အားနည်းချက်ဖန်တီးလိမ့်မည်။ ဒါဟာလူငယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်ကုသမှုအစီအစဉ်များကိုပိုမိုဘက်စုံဖြစ်လာစေရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Re-ဖောက်ပြန်တဲ့၏အန္တရာယ်ကိုမိမိတို့၏အနည်းကိန်းအာရုံစိုက်လျှော့ချရေးအဖြစ်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ အဲဒီအစား, relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု-တည်ဆောက်ခြင်းကုထုံးကြားဝင်တစ်ဦးကို dual အာရုံစိုက်-လျှော့ချလူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ရှိသင့်ပါတယ်။ လူမှုရေးအရည်အချင်းကို၏တိုးမြှင်လိုလားသူလူမှုရေးသဘောထားတွေ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကုသမှုနှင့်လမ်းညွှန်အားထုတ်မှုမှနျကွောငျးဝနျခံသောမဟုတျဘဲရန်လိုသည့်အပြုအမူမှတဆင့်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးနှင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်ဆုလာဘ်များဆည်းဆုံးမဩဝါဒပေးမှာညွှန်ကြားရပါမည်။ အကျယ်ချဲ့ထိရောက်သောဖြစ်စေရန်, ကုသမှုအားထုတ်မှုကိုလည်းမိသားစုအရေးကိစ္စများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်အချက်များ (စသည်တို့ကိုမြင့်မားတဲ့ရာဇဝတ်မှုဒေသများ, ဂိုဏ်းအကြမ်းဖက်မှု, ရန်ဥပမာနီးကပ်) အပါအဝင်လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ကိုထောက်ပံ့သောစနစ်တကျအချက်များ, ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအတွက်လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ၏ distal နှင့်ပိုပြီး Proximity antecedents နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်စာရေးဆရာများ '' သုတေသနကိုတိုးချဲ့။ ဤသည်သုတေသန, စိတ်သဘောထားပါဝင်သည်ဖို့အတ်တဆ-ရန်ပုလ်ဆောက်လုပ်ရေးတိုးချဲ့သည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မော်ဒယ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance အချက်ဆက်ပြောသည်နှင့် etiological / ပိုပြီး distal အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ညစ်ညမ်း၏လေ့လာမှုကဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါတိုးချဲ့မော်ဒယ်လမ်းကြောင်းကိုသရုပ်ခွဲစာရင်းအင်းနည်းလမ်းများသုံးပြီးတစ်ဦးလုံလောက်သောမထိုက်မတန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များ, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရလဒ်များအကြားအချင်းချင်းကြားဆက်ဆံရေးပိုမိုပီပီထင်ဟပ်။ endogenous ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ၏တိုးချဲ့ထားအသစ်ကောက်ယူစပျစ်သီးပြွတ်များအတွက်အခြေခံတဲ့လာမည့်ဆောင်းပါးအစီရင်ခံပါလိမ့်မည်လေ့လာဆန်းစစ်ပုံစံများ constructs ။ ဤဆောင်းပါးသည်ငါးလူမှုရေးအရနှင့်လိင် deviant ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ၏ရှေ့ပြေးပုံစံမျိုးကွဲနှင့်၎င်းတို့၏ထူးခြားသော etiological, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပြစ်မှုဝိသေသလက္ခဏာများများ၏ဖော်ပြချက်များပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
Abbey, အေ, Parkhill, MR, BeShears, R. , Zawacki, T. , & Clinton-Sherrod, AM (2006) ။ တစ်ခုတည်းအာဖရိကန်အမေရိကန်နှင့်ကော့ကေးဆပ်အမျိုးသားများအတွက်တစ် ဦး အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးကျူးလွန်များ၏ cross- အပိုင်းခန့်မှန်း။ ရန်လိုမူအကျင့်, 32(1), 54-67 ။CrossRef
Achenbach, TM, & Dumenci, L. (2001) ။ ပင်ကိုယ်မူလအခြေခံသည့်အကဲဖြတ်မှုတွင်တိုးတက်မှုများ - ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောသတင်းပေးသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့် CBCL၊ YSR နှင့် TRF အတွက် DSM ကို ဦး တည်သည့်စကေးအသစ်များ - Lengua, Sadowski, Friedrich, and Fisher အပေါ်မှတ်ချက် (2001) ။ အတိုင်ပင်ခံ & လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 69(4), 699-702 ။CrossRef
Alexy, EM, Burgess, AW, & Prentky, RA (2009) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်သောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားပြင်းထန်သောအပြုအမူပုံစံများအတွက်အန္တရာယ်အမှတ်အသားအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါသူနာပြုများအသင်းဂျာနယ်, 14(6), 442-453 ။CrossRef
Bandura, အေ (1973) ။ ကျူးကျော်: တစ်ဦးကလူမှုရေးသင်ယူမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Englewood ကမ်းပါး: Prentice-ခန်းမ။
Bandura, အေ, Barbaranelli, C, Caprara, GV, & Pastorelli, C (1996) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားအေဂျင်စီ၏လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရား disengagement ၏ယန္တရားများ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 71, 364-374 ။CrossRef
Beggs, SM, & Grace, RC (2008) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဉာဏ်ရည်နှင့်ကလေးငယ်များအတွက်စိတ်ဓာတ်ကျမှု - အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်အထောက်အထား။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတရေးနှင့်အပြုအမူ, 35(6), 683-695 ။CrossRef
Bronfenbrenner, U. (1979) ။ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု၏ဂေဟဗေဒ: သဘောသဘာဝနှင့်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်စမ်းသပ်ချက်။ ကိန်းဘရစ်ချ်: ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်။
ဘရောင်း, GW, Craig, TK, & Harris က, TO (2008) ။ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏ကလေးသူငယ်အတွေ့အကြုံ (CECA) ကို အသုံးပြု၍ မိဘ၏မတော်မတရားပြုမှုနှင့်ချဉ်းကပ်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များ - နာတာရှည်စိတ်ကျရောဂါ၏ဘဝလမ်းစဉ်လေ့လာမှု — ၅ ။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်, 110(3), 222-233 ။CrossRefPubMed
Brumbach, BH, Figueredo, AJ, & Ellis, BJ (2009) ။ ဘဝသမိုင်းမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ကြမ်းတမ်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်ပတ်ဝန်းကျင်၏ဆိုးကျိုးများ: တစ် ဦး ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မော်ဒယ်တစ် ဦး longitudinal စမ်းသပ်မှု။ လူ့သဘာ, 20, 25-51 ။CrossRef
Burt, MR (1980) ။ မုဒိမ်းမှုများအတွက်ယဉ်ကျေးမှုဒဏ္ဍာရီများနှင့်အထောက်အပံ့များ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး & လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 38(2), 217-230 ။CrossRef
, ဖက်စပ် (1985) စစ်ဆေးပါ။ အမျိုးသမီးများနေ့စကေးခါနီးအဆိုပါရန်လို။ စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း abstraction အင်တာနေရှင်နယ်, 45 (12-B က, Pt 1), 3993 ။
Elliott, DS, & Huizinga, D. (1983) ။ လူမှုရေးလူတန်းစားနှင့်အမျိုးသားရေးလူငယ် panel ကိုအတွက်ဆိုးသွမ်းအပြုအမူ။ Criminology: An Interdisciplinary ဂျာနယ်, 21(2), 149-177 ။
အဲလစ်, BJ, Figueredo, AJ, Brumbach, BH, & Schlomer, GL (2009) ပတ် ၀ န်းကျင်အန္တရာယ်၏အခြေခံအကျဆုံးရှုထောင့်များ - ဘဝသမိုင်းမဟာဗျူဟာများဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကြမ်းတမ်းစွာနှိုင်းယှဉ်။ မရသောပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှု။ လူ့သဘာ, 20, 204-268 ။CrossRef
Figueredo, AJ, & Jacobs, WJ (2009) ။ ကျူးကျော်ခြင်း၊ စွန့်စားရမှုနှင့်အခြားဘဝသမိုင်းကြောင်းမဟာဗျူဟာများ - လူမှုရေးဆုတ်ယုတ်ခြင်း၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဂေဟဗေဒ။ အမ် Frias-Armenta & V. Corral-Verdugo (Eds ။ ) တွင်, ကျူးကျော်အပေါ် Biopsychosocial ပတ်သ က်., စာနယ်ဇင်းများတွင်။
Figueredo, AJ, McKnight, PE, McKnight, KM, & Sidani, S. (2000) ။ အကဲဖြတ်လှိုင်းတံပိုးအတွင်းနှင့်အနှံ့ပျောက်ဆုံးနေအချက်အလက်များ၏ Multivariate မော်ဒယ်လ်။ စွဲ, 95, S3-S361 (380 ဖြည့်စွက်) ။PubMed
Gorsuch, RL (1983) ။ factor အားသုံးသပ်ခြင်း။ Hillsdale: Lawrence Erlbaum ။
ခန်းမ, Gn, et al ။ (2005) ။ လူမျိုးရေး, ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: အန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 73, 830-840 ။CrossRef
Hanson, RK, & Morton-Bourgon, KE (2005) ။ မြဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: recidivism လေ့လာမှုများတစ် Meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 73(6), 1154-1163 ။CrossRefPubMed
Hunter, JA, Goodwin, DW, & Becker, JV (1994) ။ phallometrically တိုင်းတာ deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်လက်တွေ့ဝိသေသလက္ခဏာများအကြားဆက်ဆံရေး။ အပြုအမူသုတေသနနှင့်ကုထုံး, 32(5), 533-538 ။CrossRefPubMed
Hunter, JA, Figueredo, AJ, Malamuth, NM, & Becker, JV (2004) ။ လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ဆိုးသွမ်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း: အန္တရာယ်အချက်များနှင့်ဖျန်ဖြေ။ မိသားစုအကြမ်းဖက်မှု, 19 ၏ဂျာနယ်(4), 233-242 ။CrossRef
ဂျက်ဆင်, DN (1987) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသုတေသနပုံစံ-form ကိုအီး။ ဆိပ်ကမ်း Huron: သုတေသနစိတျပညာ။
Jacques-Tiura, အေ, Abbey, အေ, Pakhill, အမ်, & Zawacki, တီ (2007) ။ အချို့ယောက်ျားများသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များကိုအခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ မှားယွင်းစွာမှတ်မိလေ့ရှိသနည်း။ အဆိုပါမြစ်ဆုံမော်ဒယ်တစ်ခုလျှောက်လွှာ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 33, 1467-1480 ။CrossRefPubMed
Kingston, DA, Firestone, P. , Wexler, အေ, & ဘရက်ဖို့ဒ, JM (2008) ။ မိသားစုအတွင်း၌ရှိသောကလေးငယ်များအကြားစိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ဂျာနယ်, 14(1), 3-18 ။CrossRef
Levenson, MR, Kiehl, KA, & Fitzpatrick, CM (1995) ။ တစ် ဦး noninstitutionalized လူ ဦး ရေအတွက် psychopathic attribute တွေအကဲဖြတ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး & လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 68(1), 151-158 ။CrossRef
Lim, အက်စ်, & Howard, R. (1998) ။ ငယ်ရွယ်သောစင်္ကာပူအမျိုးသားများအတွက်လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျူးလွန်မှုများရှေ့တွင်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 25, 1163-1182 ။CrossRef
Malamuth, မိုင် (1989) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်စကေးဖို့ဆွဲဆောင်မှု: ဗြဲ လိင်သုတေသန 26 ၏ဂျာနယ်(1), 26-49 ။CrossRef
Malamuth, မိုင် (1996) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု၏ပေါင်းစပ်မှုပုံစံ - အမျိုးသမီးနှင့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုအမြင်များ။ DM Buss & NM Malamuth (Eds ။ ) တွင် လိင်, ပါဝါ, ပဋိပက္ခ: ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အမျိုးသမီးရှုထောင့် (စစ။ 269-295) ။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်က။
Malamuth, မိုင် (1998) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုသောအမျိုးသားများအတွက်သုတေသနပြုရန်စည်းရုံးရေးမူဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည့်မြစ်ဆုံမော်ဒယ် - စွန့်စားသူ၊ RG Geen & အီး Donnerstein (Eds ။ ) တွင်, လူ့ကျူးကျော်: သီအိုရီ, သုတေသနနှင့်လူမှုရေးမူဝါဒဂယက်ရိုက် (စစ။ 229-245) ။ San Diego မှ: ပညာရေးဆိုင်ရာ။
Malamuth, N. (2003) ။ ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုကင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သူများ။ RA Prentky, အီး Janus & အမ်ဆက်တို (Eds ။ ) တွင် နားလည်မှုနှင့်မန်နေးဂျင်းလိင် Coercive အပြုအမူ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ, Vol ၏ရာဇဝင်။ 989 (စစ။ 33-58) ။ နယူးယောက်: သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ။
Malamuth, မိုင်, Heavey, CL, & Linz, D. (1993) ။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အမျိုးသားများ၏လူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများခန့်မှန်းခြင်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု၏အပြန်အလှန်ပုံစံ။ GCN ခန်းမ, R. Hirschman et ။ al ။ (Eds ။ ), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: etiology အတွက်ကိစ္စများ, အကဲဖြတ်နှင့်ကုသရေး (Vol ။ xix, စစ။ 238) ။ Philadelphia တွင်, PA: တေလာ & Francis က။
Malamuth, မိုင်, Linz, ဃ, Heavey, CL, Barnes, G. အ, et al ။ (1995) ။ မိန်းမနှင့်ယောက်ျားရဲ့ပဋိပက္ခကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏မြစ်ဆုံမော်ဒယ်အသုံးပြုခြင်း: တစ်ဦးက 10 နှစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး & လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 69(2), 353-369 ။CrossRef
မာတင်, SR, et al ။ (2005) ။ စပိန်ကောလိပ်ယောက်ျား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Interpersonal အကြမ်းဖက်မှု, 20 ၏ဂျာနယ်(7), 872-891 ။CrossRefPubMed
နယ်လ်ဆင်, PA (1979) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: နည်းစနစ်အတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု။ စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း abstraction အင်တာနေရှင်နယ်, 39(12B), 6134 ။
Rowe, DC, Vazsonyi, AT, & Figueredo, AJ (1997) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မိတ်လိုက် - အားထုတ်မှု: တစ်ခြွင်းချက်သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာမဟာဗျူဟာ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 23(1), 105-115 ။CrossRef
Spence, JT, Helmreich, RL, & Holahan, CK (1979) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုလ်နှင့်inတ္၏အပျက်သဘောဆောင်သောအပြုသဘောဆောင်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့် neurotic နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေး။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး & လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 37(10), 1673-1682 ။CrossRef
Waite, D. , Keller, အေ, McGarvey, အီး, Wieckowski, အီး, Pinkerton, R. , & ဘရောင်း, GL (2005) ။ လိင်ဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အကြမ်းမဖက်သောလိင်မဟုတ်သော၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်ပြန်လည်ရာဇ ၀ တ်မှု - ၁၀ နှစ်နောက်ဆက်တွဲ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု: သုတေသနနှင့်ကုသရေး၏ဂျာနယ်, 17(3), 313-331 ။CrossRef